कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ११ करोड १ लाख ८४ हजार नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ९ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । कम्पनीले गत आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. १० करोड ३ लाख नाफा कमाएको थियो ।
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको आम्दानीमा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो । गत आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. १३ करोड ३९ लाख आम्दानी गरेको उक्त कम्पनीले चालू आवको सोही अवधिमा रू. १४ करोड ९७ लाख आम्दानी गरेको छ ।
कम्पनीले जगेडा कोषमा रू. ७२ करोड ८० करोड सञ्चित गरेको छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. १ अर्ब ४० करोड २१ लाखभन्दा बढी बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ ।
यो रकम गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । कम्पनीले गत आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ८० करोड ८८ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो ।